Ururka Musharaxiinta oo ka gorgortamaya go'aanka XFS
Ururka Musharaxiinta oo ka gorgortamaya go’aanka XFS
Kulan gaar ah oo ay yeesheen Midowga Musharaxiinta Hogaamiyaha Soomaaliya ayaa fiidnimadii caawa ka furmay magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayo go’aanka ay dowladda qaadatay toddobaadkan ee ah in la qabto doorasho hal dhinac ah
Shirka Musharaxiinta oo ay ka maqan tahay Warbaahinta ayaa looga hadlayaa sida laga yeelayo go’aanka, kulan ay la qaateen Madaxweynayaasha Galmudug, Koofur Galbeed & Hir-Shabeelle oo ku soo dhamaaday fashil.
Inta badan musharixiinta UN-ka ayaa kusugan goobta, warbaahinta gudahana looma ogola, madaama kalfadhigooda uu yeelan doono dood adag oo ku saabsan sida loola yimaado qorshahooda cusub.
Kulankii saacadihii la soo dhaafay ayaa socdey, iyadoo musharixiinta ay yeesheen kalfadhiyo gooni gooni ah ka hor inta aysan ku soo arkin hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho oo ah halka ay ku shirayaan.
Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa kulanka xubno ka tirsan Gudiga oo horey u shaaciyey Midowga Musharaxiinta sida Gudoomiyaha, Kuxigeenka & Afhayeenka, waxayna daqiiqadihii ugu horeeyey ee kulanka is dhaafsadeen macluumaad sida Axadle u xaqiijiyey ilo ku dhaw kulanka.
Haddaba, maxaa ka soo bixi kara kulanka deg-degga ah ee Midowga Musharaxiinta Hogaamiyaha Soomaaliya 2021?
Kulankii weynaa ee Premier League oo dib loo dhigay
IGAD panel on border tensions between Somalia and Kenya